तपाईंको ट्रेलर गृहमा कसरी ठाउँ बनाउने - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक 16 सक्छ, 2021 14 सक्छ, 2021 डेभिड ज्याक्सन, एमबीए ब्लग, सम्पादकको पिक, जीवन शैली
तपाईंको ट्रेलर गृहमा उपलब्ध सीमित स्थान अनुकूलन गर्न संगठन र सही उपकरणहरू र उपकरणहरू आवश्यक छ।
केहि क्षेत्रहरू खाली ठाउँ बचाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेको निन्द्रा क्षेत्र, भान्छा र बाथरूम।
डि-क्लटरिंगले ठूलो फरक पार्छ। थप भण्डारण ठाउँ भाँडामा लिनु ठीकै लायक हुन सक्छ, तपाईंको स्थान र दीर्घ-अवधि यात्रा योजनाहरूको आधारमा।
एक ट्रेलर घर यात्रा को मजा लिने र लागत कम राख्न चाहनेहरूको लागि एक महान अवधारणा हो। एक ट्रेलर घर त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं सदाका लागि राख्न सक्नुहुन्छ, अपडेट र अपग्रेडको लागि आवश्यक पर्दा र सम्पूर्ण परिवारको लागि निश्चित प्रयोग गर्नुहोस्। यो तपाइँको दीर्घकालीन घर हुन सक्छ वा सानो यात्राको लागि मात्र प्रयोग हुन सक्छ।
जे भए पनि, स्थान बनाउनु यसलाई वास्तविकता बनाउने महत्त्वपूर्ण तत्व हो। ठाउँ बनाउनुले तपाईंलाई तपाईंसँग भएको सानो ठाउँको मजा लिन, कार्यशील हुन र सजिलो यात्राको लागि अनुमति दिन अनुमति दिन्छ। यस क्वेस्टमा मद्दत गर्नका लागि केहि सुझावहरू हेरौं।
भान्साको क्षेत्र सम्भवत एक मात्र स्थान हो जहाँ सबै जना खाना खाने समयमा भेट्नेछन्। यो विशेष रूपमा राम्रो संगठित हुनुपर्दछ, र सबै भन्दा माथि, राम्रो अप्टिमाइज हुनु पर्छ।
तपाईंको भान्छा क्षेत्रलाई अनुकूलन गर्नुहोस्
यो गर्नका लागि तपाईले ठाडो रूपमा सोच्नु पर्छ र तपाईको वर्कटपको माथि उपलब्ध ठाँउ प्रयोग गर्नुपर्नेछ। उत्तम विकल्प प्राय: भण्डारण ह्या hanging्ग गर्दै हुन्छ। धेरै संख्यामा सामानहरू भण्डारण गर्न सक्षम हुनुको साथै, यो व्यवस्थाले कुनै पनि हिसाबले तपाईंको मोटरहोममा बाँकी ठाउँलाई गडबड गर्दैन।
यात्राको क्रममा तपाईंको सबै भाँडाहरू र प्रावधानहरूलाई स्थानमा राख्नको लागि हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईंले बार्ड बारहरू र भण्डारण नेटहरू प्रयोग गर्नुहोस्। कपाटका भित्री भागका लागि, राम्रो तरीका भनेको आफैलाई आयोजकहरू र भण्डारणबाट सुसज्जित बनाउनु हो जुन ढोकामा संलग्न हुन सक्दछ।
एक समारोह बाथरूम
मोटोहोममा, सेनेटरी रिक्त स्थान लेआउट र व्यावहारिकताको सन्दर्भमा निर्दोष हुनुपर्दछ। सबै यात्रीहरूले त्यहाँ सहज महसुस गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। शौचालयहरूको लागि, हामी तपाईंलाई क्लासिक मोटरहोम शौचालयहरूको छनौट गर्न सल्लाह दिन्छौं।
मोटोहोममा, सेनेटरी रिक्त स्थान लेआउट र व्यावहारिकताको सन्दर्भमा निर्दोष हुनुपर्दछ।
क्यासेट शौचालय: यो यातायात गर्न धेरै सजिलो छ र खाली छ, यो मोडेल कार्यहरू द्वारा विशेषता गरिन्छ जुन सधैं धेरै व्यावहारिक हुन्छ। क्यासेट शौचालयहरूमा एउटा कुचको कचौरा छ, जसले तिनीहरूलाई सबै स्थानहरूमा अनुकूलनीय बनाउँदछ।
रासायनिक शौचालय: विशेष रासायनिक मोटरहोम शौचालयहरू आदर्श हुन् कि तिनीहरू दुबै सौंदर्यशास्त्र र पूर्ण स्वच्छता संयोजन गर्दछन्। यस प्रकारको शौचालय धेरै सजीलो यातायात योग्य हुन्छ; तर तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो फाइदा स्वच्छ पानी जेटमा रहेको छ जुन अप्रिय गन्धहरूलाई बेवास्ता गर्दा कचौरा खाली प्रयोगको मात्र अनुमति दिन्छ।
आवश्यक पर्दा थप भण्डारण ठाउँ प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग तपाईंको ट्रेलर घरमा धेरै वस्तुहरू छन् भने, तपाईं आफूले चाहानु भएको आरामसँग बस्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं कहीँ लामो अवधिमा बस्न योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक निजी भण्डारण इकाई भाडामा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन संगठनलाई ठूलो सहयोग गर्न सक्दछ! यदि तपाईं युटा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं सुरक्षित पाउन सक्नुहुन्छ पार्क शहरमा स्वयं भण्डारण तपाइँका सबै चीजहरू सुरक्षित र सुरक्षित राख्न
तपाईंको सुत्ने क्षेत्र प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईको मोटरहोममा सुत्ने ठाउँको सम्भावित क्षेत्र मध्ये एक सुत्ने ठाउँ हो। जे होस्, यो सामान्यतया साँझमा मात्र प्रयोग गरिन्छ। नतिजाको रूपमा, निर्माणकर्ताहरू हटाउन योग्य र फोल्डयोग्य बेड र बन्क्सको सिर्जनामा ​​निरन्तर नवीन गर्दै छन्।
आज, अल्ट्रा कम्प्याक्ट बच्चाहरूको ओछ्यानहरू फेला पार्न सजिलो छ, तर अझै धेरै आरामदायक छ र सबै भन्दा कम ठाउँ लिनको लागि। यदि, तथापि, तपाईंसँग क्लासिक सुत्ने ठाउँ छ भने, हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं कि सान्त्वना नलगाउनुहोस् र गद्दा छनौट गर्नुहोस् जुन दुबै कम्प्याक्ट र सहज छ। त्यस्तै प्रकारले, बक्स वसन्तको सन्दर्भमा, एक स्ल्टेड मोडेल तपाईंको गद्दा सास फेर्नको लागि उपयुक्त हुनेछ।
के यो सडकमा चढ्ने समय हो? तपाईंको यात्रालाई अधिक सुविधाजनक र व्यवस्थित गर्न यी सुझावहरू सम्झनुहोस्!
trailerhome ट्रेलरलिवि। trailerorganization
डेभिड ज्याक्सन, एमबीए
डेभिड ज्याक्सन, एमबीएले विश्व विश्वविद्यालयमा फाइनान्स डिग्री पाएको छ र त्यहाँ योगदान दिने सम्पादक र लेखक हो। उसले युटामा 501०१ (c) non गैर नाफाको बोर्डमा पनि कार्य गर्दछ।